Android 12 ga - agụnye "otu aka" nke Google na - arụ ọrụ | Gam akporosis
Google na aru oru “otu aka” na Android 12
na Ndị na-emepụta OEM ga-ahụ ihe ọhụụ a na AOSP nke gam akporo 12 inwe ike iweta ọnọdụ "otu aka" na ekwentị mkpanaaka gị. Ihe ohuru nke Android 12 nke anyi tinyegoro na udiri ndi ozo dika Samsung.
Ọchịchọ bụ na Google yiri ka idetuo Samsung ọzọ na o nwere ya dị ka isi iyi nke mkpali; oh, afọ ndị ahụ ọ jiri ihe si na iOS tinye ya, ebe ọ bụ akara South Korea nke na - anaghị akwụsị ịgbanwe dị ka anyị hụworo na One UI 3.0.
AOSP bụ ụdị nke mepere emepe nke gam akporo na nke onye nrụpụta ekwentị ọ bụla ga - ahụ “ọnọdụ aka otu” ọhụrụ iji jiri ekwentị dị mfe; karịsịa mgbe ịnweghị aka buru ibu ma ọ bụ ọkara.
otú emeputa na-agaghị mepụtara a mode na ha igwe,, ị nwere ike iji ọnọdụ a otu aka, ọ bụ ezie na amabeghị ma Google ga-etinye ya na ngwaọrụ gam akporo 12 niile.
Anyị ga-eme chere ka nwere mockup nke imewe a mode si Google na gam akporo 12. Dị ka ndị nrụpụta ndị ọzọ, ihe emepụtara bụ windo pere mpe nke ihuenyo ekwentị iji nweta ihe dị iche iche nke interface; Nke a bụ ihe ndị ọzọ na-emepụta emeela kemgbe ha mejuputara ọnọdụ a.
Ihe anyị maara bụ na enwere ike ịme ya site na mmegharị ahụ enwere ike ịhazi ya site na Ntọala na gam akporo 12. Na ee, Google adịghị nwayọ ọbụla tinye mgbakwunye nhọrọ nke iweta nseta ihuenyo site na ịpịgharịa iji webụsaịtị ma ọ bụ karịa.
Bụrụ na ọ bụla, ọ ga-adị mkpa ịhụ ọ bụrụ na Google mepụtara ihe ọhụrụ maka ọnọdụ aka nke ga-abata na AOSP Android 12 na nke onye ọ bụla na-ere gam akporo igwe nwere ike iji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na aru oru “otu aka” na Android 12
Moto G10 na Moto G30 bụ ụdị ntinye ọhụụ nwere nnukwu batrị yana gam akporo 11